Leagoo Kiica Power သည် ၅၁ ယူရိုသာသာရောင်းနိုင်သည် Androidsis
Leagoo KIICAA Power ကမ်းလှမ်းမှုသည် ၅၁.၈၇ ယူရိုသာရှိသည်။ ပြေးသူတို့ကုန်နေကြတယ် !!
Francisco Ruiz | | Android ထုတ်ကုန်များ, မိုဘိုင်း
ဒီနေ့နောက်ဆုံးသုံးရက်လောက်သာကြာတဲ့ဒီ flash ကမ်းလှမ်းချက်များကိုခင်ဗျားတို့ယူလာပါပြီ။ အကယ်၍ သင်စာရွက်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအရအလွန်ဈေးကောင်းတဲ့ပန်းချီကားများ၏တရုတ်ဆိပ်ကမ်းကို ၀ ယ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ယူရို ၅၀ နဲ့ရှာတွေ့နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတွေထဲကတစ်ခုအထူးသ 51,87 ယူရိုဒါဟာဖြစ်ပါသည် AliExpress တွင် Leagoo KIICAA Power ကမ်းလှမ်းချက်ရှိသည်.
ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့ရှိသမျှသည်ထားခဲ့ပါ Leagoo KIICAA ပါဝါနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနိူင်ငံရေးနိမ့်နိူင် Android entry-level terminal ရှိ hardware များပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တစ်ကိုယ်ရည်စမ်းကြည့်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။
Leagoo KIICAA Power ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
ပုံစံ KIICAA ပါဝါ
operating system Steadier OS အလွှာဖြင့် Android 7.0 Nougat
ဖန်သားပြင် ၅ လက်မ IPS HD သည်5dpi pixel သိပ်သည်းဆနှင့်အတူဖွဲ့စည်းထားသည်
Processor ကို 6580 Ghz Quad Core Mediatek 1.3A
GPU ကို မာလီ T400
ရမ်2Gb
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း MicroSD အထောက်အပံ့မပါဘဲ 16 Gb
နောက်ကင်မရာ Sony အာရုံခံကိရိယာပါသော 8 +5mpx ကင်မရာ
ရှေ့ကင်မရာ ပြီးပြည့်စုံသော selfies အတွက် Sony sensor နှင့်အလှအပနှင့်အတူ5mpx
ဆက်သွယ်မှု Dual SIM2Micro SIM 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 900 / 2100MHz - Wifi - Bluetooth 4.0 - GPS နှင့် aGPS
အခြားအင်္ဂါရပ်များ terminal ၏နောက်ဘက်ရှိလက်ဗွေရာဖတ်စက် - ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းအာရုံခံကိရိယာ - ဆွဲငင်အားအာရုံခံကိရိယာ - Proximity အာရုံခံကိရိယာ
ဘက်ထရီ ဖယ်ရှားနိုင်သော 4050 mAh
စြေး ၅၁.၈၇ ယူရိုသည်ကမ်းလှမ်းမှုအပြီးတွင်တရားဝင်ဈေးနှုန်းဖြင့် ၆၁ ယူရိုဖြစ်ပြီးတရားဝင်ဈေးနှုန်းဖြစ်သည်
ဒီဟာကအကောင်းဆုံး Leagoo KIICAA ပါဝါAndroid ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည့်၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းသည်၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်မကိုက်ညီပါ dual ကင်မရာဖြစ်လို့ယူဆတယ်ဖြစ်ကြောင်းနောက်ကင်မရာများ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအနိမ့်စျေးနှုန်းအကွာအဝေး€ 50/60 အတွက်စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သောဆိပ်ကမ်းအထက်အရည်အသွေးကိုပူဇော်လိမ့်မယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်တော်တစ် ဦး ရှိသည် HD resolution နှင့်အတူအလွန်ကောင်းသော IPS မျက်နှာပြင်, ၁၂၈၀ x ၇၂၀ ပစ်ဇယ်များသည် ၄၀၀ dpi နှင့်အတူသဘာ ၀ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကြည့်နိုင်သည်။ ဒါကမရေမတွက်နိုင်သော 1280 mAh ဘက်ထရီအပြင် ထပ်မံ၍ တွက်ချက်ရန်အတွက်၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးသင့်သည် 4G မပါဘူးသင့်တယ် တက်ကြွစွာဖန်သားပြင်၏ 10 နာရီဝန်းကျင်သို့မဟုတ်ပင်ကျော်လွန်.
ငါပြောတာကအကယ်လို့မင်းကအမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ချင်တယ်၊ အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက်ချင်တယ်၊ သူတို့ရဲ့လူမှုရေးကွန်ရက်တွေကိုလာကြည့်ပါ၊ WhatsApp, Telegram နှင့်အလားတူအက်ပ်များကို chat ထူးဆန်းတ ဦး တည်းယူပြီးမှတပါး လျောက်ပတ်သောအရည်အသွေးဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယို,apriori နှင့်အနည်းငယ်သာပို။ ယူဘို့, သင်ပိုကောင်းတဲ့ option ကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုမထင်ကြဘူး။
access ကိုပု ဒီ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီ Leagoo KIICAA Power ၏ flash ကမ်းလှမ်းချက်ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » Leagoo KIICAA Power ကမ်းလှမ်းမှုသည် ၅၁.၈၇ ယူရိုသာရှိသည်။ ပြေးသူတို့ကုန်နေကြတယ် !!
6580A ကကျွန်တော့်ကိုအနည်းငယ်ပြန်ကောင်းအောင်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါပြီ။ အနည်းဆုံးဘက်ထရီဟာဖုန်းအရံအဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့ကြာမြင့်စွာနေသင့်တယ်။ ၄၀၅၀ mAh ကကောင်းတယ်။
လာမည့်နှစ်တွင် ၁၅ လက်မမျက်နှာပြင်စမတ်စပီကာကို Facebook စတင်မည်